Semalt: सुन्दर सूपको साथ वेब स्क्र्यापिंग
आज त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन व्यक्तिले विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा निकाल्न सक्छ। गुगल र फेसबुक जस्ता धेरै वेबसाइटहरूले एपीआईहरू प्रदान गर्छन् जुन वेब खोजकर्ताहरूले उनीहरूले चाहेको सबै सम्बन्धित जानकारीमा पहुँच गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। तर सबै वेब पृष्ठहरू एपीआईहरूसँग सुसज्जित छैनन्, किनकि उनीहरू आफ्ना पाठकहरू उनीहरूबाट कुनै पनि प्रकारको जानकारी भेला गर्न चाहँदैनन् वा किनभने तिनीहरू उन्नत टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित छैनन्। तर वेब स्क्रेपरहरूले के यस्ता प्रकारहरूमा गर्न सक्दछन्? यदि निश्चित वेब पृष्ठहरूले एपीआई प्रयोग गर्दैनन् भने कसरी तिनीहरू डेटा निकाल्न सक्छन्? सत्य यो हो कि तिनीहरूले वास्तव मा धेरै मा वेबसाइटहरु को स्क्र्याप गर्न सक्छन्।
राम्रो नतीजाहरूको लागि गुगल कागजातहरू प्रयोग गर्नुहोस्
गुगल डक्स प्रयोग गरेर, तिनीहरू वास्तवमै तिनीहरू आवश्यक सबै जानकारीहरू ल्याउन सक्दछन्। तिनीहरूले यसलाई प्राय: सबै प्रोग्रामिंग भाषामा लागू गर्न सक्दछन्, जस्तै पाइथन। पाइथन एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा हो, जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र प्रोग्रामरहरूलाई उनीहरूको परियोजना वास्तविक संसारमा जडान गर्न दिन्छ। यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई कोडका कम लाइनहरूमा विभिन्न अवधारणाहरू व्यक्त गर्न अनुमति दिन्छ जुन जाभाजस्ता अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरू।
सुन्दर सूप (पाइथन लाइब्रेरी): द्रुत कार्यहरूको लागि अचम्मको उपकरण
पाइथन लाइब्रेरीले वेब स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूमा द्रुत रूपान्तरणको लागि अनुमति दिन्छ र यसले निश्चित कार्य गर्नको लागि धेरै पुस्तकालयहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, ब्यूटीफुलसप द्रुत कार्यहरूको लागि सजिलो उपकरण हो, जस्तै विभिन्न डाटा बाहिर तान्न, जस्तै सूचिहरू, सम्पर्कहरू, तालिकाहरू र अधिक। वास्तवमा, ब्यूटीफुलसपले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई नेविगेट गर्न, खोजी गर्न र निश्चित डाटा परिवर्तन गर्न केही सरल र प्रभावकारी विधिहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो HTML कागजात लिन्छ, र यसले यसलाई पार्स गर्दछ, मेमोरीमा सम्बन्धित संरचना बनाएर। यसबाहेक, यसले स्वचालित रूपमा कुनै पनि आगमन कागजातहरूलाई युनिकोडमा रूपान्तरण गर्दछ, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले अन्तको बारेमा सोच्न पर्दैन।
सुन्दर सूप को विशेषताहरु
प्रयोगकर्ताहरूले दुबै विन्डोज र लिनक्स प्रणालीहरूमा यो प्रभावी निकाल्ने उपकरण स्थापना गर्न सक्दछन्। त्यसोभए, तिनीहरू नेभिगेट गर्न सक्छन् र सरल रूपमा प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने सिक्दछन्। तिनीहरूले सबै आवश्यक उदाहरणहरू देख्न सक्दछन् कि उनीहरू कसरी यो प्रणाली प्रयोग गर्ने छन् भन्ने बारे एक विचार प्राप्त गर्न। यी उदाहरणहरूले तिनीहरूलाई प्रणाली राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। यो अझ राम्रोसँग जान्नको लागि व्यावहारिक मार्गनिर्देशन हो कि कसरी विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न सक्छ।
यसले पार्स गरिएको डाटालाई मूल कागजात जस्तो देखिन्छ। तर केसहरूमा केही विशेष कागजातमा केही त्रुटिहरू भएमा सुन्दर सूपले तिनीहरूलाई चित्रण गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई उचित संरचना प्रदान गर्दछ। सुन्दर सूपले केही उत्कृष्ट गुणहरू प्रदान गर्दछ, जसले HTML तत्वहरूको नाम दिन्छ, तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि अधिक सजिलो बनाउनको लागि। वेब स्क्र्यापर्सलाई याद गर्नु आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, कि एक तत्वमा धेरै प्रकारका वर्गहरू हुन सक्दछन् र वर्गलाई तत्वहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यी तत्वहरूको प्रत्येकमा केवल एक आईडी हुन सक्छ, जुन पृष्ठमा एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुन्दर सूप एक उत्कृष्ट कार्यक्रम हो, जुन मुख्य रूपमा वेब स्क्र्यापिंग जस्ता परियोजनाहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले पार्स ट्रीलाई परिमार्जन गर्नका लागि यसको केहि सरल विधिहरू प्रदान गर्दछ। यो भाषा प्रोग्राम LXML जस्तो पाइथनको सर्वश्रेष्ठ पार्सको शीर्षमा विकसित गरिएको छ र यो निकै लचिलो छ। वास्तवमा, यसले लक गरिएको डेटा फेला पार्दछ र मिनेटमा वेब स्क्रेपर्सका लागि सबै आवश्यक जानकारी एकत्रित गर्दछ।